Qubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse. – Kichuu
HomeNewsAfricaQubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse.
Qubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse. Laaftutti L jedhanii lallaaquun hin taatu. Mee seenaa dhufaatii Qubee irratti barruu hayyuun Seerlugaa Dr Abdulsamad Mohammed bara 2013 barreessan tana laalaa. Barruun tun gafa Dr Shek Muhmmadrashaad Abdullee gara fuula rabbii deemaan qooda isaan guddina Afaan Oromoo keessatti qabaniif akka yaadannootti barreeffamte.
OneLoveManchester concert:With favorites Ariana Grande, Cold Play,